Soulmate (ရင်ဘတ်ချင်းနီးသူ) နဲ့ Life Partner (ဘဝလက်တွဲဖော်) ကြားက အဓိကကွာခြားချက် (၄)ခု - Lifestyle Myanmar
Soulmate (ရင်ဘတ်ချင်းနီးသူ) နဲ့ Life Partner (ဘဝလက်တွဲဖော်) ကြားက အဓိကကွာခြားချက် (၄)ခု
လူအများစုက soulmate ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို မကြာခဏ လွဲမှားမှုတွေရှိပါတယ်။ ဒီအဓိပ္ပာယ်က သင်တို့ အတူတူနေရဖို့ ရေစက်ကံပါလာတယ်လို့ ဆိုလိုတာလား? တစ်ဦးကို တစ်ဦး ယူဆောင်လာပေးတဲ့ ကံကြမ္မာလား? သင့်ရဲ့အချစ်က ထာဝရတည်မြဲပြီး ရိုမီယိုနဲ့ ဂျူးလီးယက်လို သမိုင်းမှာ တည်ရှိနေမှာလား? ဒါဆိုရင် ဘာက သင့်ဘဝလက်တွဲဖော် (life partner)ကို ဖြစ်စေသလဲ? သင့်ဘဝလက်တွဲဖော်က သင့်ရဲ့ ရင်ဘတ်ချင်းနီးသူလည်း ဖြစ်နိုင်သလား?
soulmate ဆိုတာ သင့်စိတ်နဲ့ တစ်သားတည်းကိုက်ညီတဲ့ သူမျိုးပြီး သင့်စိတ်ကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ လွှမ်းမိုးနိုင် ၊ ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသင်ခန်းစာပြီးသွားရင်တော့ အများအားဖြင့် ကွဲသွားတတ်ကြပါတယ်။
life partner ဆိုတာ သင်မှီခိုအားထားနိုင်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် (သို့) အဖော်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သူတို့ကို ယုံကြည်စိတ်ချလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် လေးစားမှု ခံစားရခြင်းက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။
soulmate နဲ့ life partner တွေအကြား အဓိက မတူညီမှုကို ဘယ်လိုဖော်ပြသလဲ?
၁။ soulmate တွေမှာ စိတ်ချင်းဆက်သွယ်မှု နက်ရှိုင်းပါတယ်
soulmate တွေဟာ အချိန်အကြာကြီး သိခဲ့ဖူးသလို ခံစားရစေပါတယ်။ တွေ့တဲ့အချိန် သိပ်မကြာသေးရင်တောင် ၊ ရည်းစားဖြစ်တာ သိပ်မကြာသေးရင်တောင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အရမ်းကို ရင်းနှီးပြီးသား ခံစားမှုမျိုးကို ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့ရဲ့ ဆက်သွယ်မှုက သဘာဝအရ စိတ်ချင်းဆက်နွယ်ပြီး အရမ်းနက်ရှိုင်းပါတယ်။ ဘဝမိတ်ဖက်အနေဖြင့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဆွဲဆောင်ပြီး တစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေကို တစ်ယောက်က အပြည့်အဝ နားလည်တန်ဖိုးထားပေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ Soulmate တွေက မကြာခဏဆိုသလို လက်ရှိအခြေအနေကို အရင်က တွေ့ကြုံခဲ့ရဖူးသလို ခံစားရတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်
လက်ရှိအခြေအနေကို အရင်က တွေ့ကြုံခဲ့ရဖူးသလို ခံစားချက်မျိုးက ဘဝလက်တွဲဖော်ဆက်ဆံရေးမှာ တွေ့ကြုံရသော်လည်း soulmate တွေမှာ အများဆုံးကြုံရနိုင်ပါတယ်။
၃။ Soulmate တွေက သူတို့ပါတနာရဲ့ စိတ်ထဲကို ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး သူတို့ဘာတွေတွေးနေသလဲဆိုတာကို နားလည်နိုင်ပါတယ်
Soulmate တွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် psychic ဆက်နွယ်မှု ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ တွေးခေါ်ပုံတွေက ထပ်တူကျနေမှာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Life partner တွေက တစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကို တစ်ယောက်ဖတ်နိုင်တာနည်းပြီး အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတွေထက် အနည်းငယ်သာပိုပါတယ်။
၄။ soulmate တွေဟာ သူတို့ရဲ့အချစ်ရေး ထာဝရတည်မြဲမှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ အရမ်းမကြာရှည်ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်
ဒီအရာက soulmate တွေနဲ့ ပတ်သတ်လာတဲ့အခါ လူတွေကြုံရလေ့ရှိတဲ့ ကြီးမားသော အထင်လွဲမှားမှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူအများစုရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ဆနန့်ကျင်ပြီး soulmate တွေရဲ့ အချစ်ရေးဟာ ထာဝရတည်မြဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတရံမှာ သူတို့ဟာ အချစ်ရေးကို သိပ်ကြာကြာ မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါဘူး။ သို့သော် အချစ်တွေက ရှိနေတယ်။ သူတို့ထာဝရမြဲမှာ မဟုတ်ပေမယ့် အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတာ သိနေဆဲပါ။ (life partner) ဘဝလက်တွဲဖော်တွေကတော့ မိသားစုတစ်ခု ထူထောင်ခြင်း(သို့)လက်ထပ်ခြင်းဖြင့် သူတို့ရဲ့ အချစ်ရေးကို ပိုမိုခိုင်မာစေလိုကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘဝတွေမှာ တစ်ခါတစ်ရံ soulmate တစ်ယောက်ရှိဖို့လိုအပ်နေပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာ life partner တစ်ယောက်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ရော ဘယ်အရာလိုအပ်တယ်လို့ ခံစားရသလဲ? ရွေးချယ်မှုက သင့်အပေါ် လုံးဝမူတည်ပါတယ်။
ကန်ရာသီခွင်အောက်မှာ မွေးဖွားသူတွေဟာ ရှုပ်ထွေးသော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့် ထူးခြားသော လက္ခဏာများရှိပါတယ်။ဒီရာသီခွင်တွေဟာ ပေးကမ်းခြင်းသဘောသဘာဝရှိပြီး အချစ်ကြီးတယ်လို့ အများသိကြပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၂၃ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၂၂ရက်အကြားမွေးဖွားတဲ့ ကန်ရာသီဖွားတွေဟာ စည်းကမ်းလိုက်နာသော အပြုအမှုနှင့် စရိုက်တွေ မွေးမြူခြင်းကြောင့် လူသိများပါတယ်။ ရာသီခွင်ထဲမှာ...
ချစ်သူစုံတွဲ၊သမီးရည်းစားဆက်ဆံရေးမှာ တခုခုမှားယွင်းသွားခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ပြတ်စဲသွားကြရင် ယောက်ျားလေးတွေကြောင့်၊ အဲဒါယောက်ျားလေးတွေမကောင်းလို့ဆိုတဲ့ လောဂျစ်တခုက ဘယ်ကနေဘယ်လိုအစပြုခဲ့သလည်းတော့မသိဘူး။ တခုခုဆိုရင် ယောက်ျားလေးတွေကိုလက်ညိုးထိုးပြီး တဖက်စောင်းနင်းမြင်နေတာမျိုးက တော်တော်ဆိုးဝါးတဲ့အယူအဆတခုဖြစ်တာတော့အမှန်ပါဘဲ။ လူတိုင်းက အမှားတော့မကင်းတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် "လိပ်တံဆိပ်ပေါက်တူး"လို ငါ့ဘက်ကဘဲ အမြဲမှန်၊ အမြဲကောင်း၊ ကိုယ့်ငါးချဉ်ကိုယ်ချဉ်လွန်းတဲ့ဒဏ်ကို...
အိုကေ၊ ဒီနေ့အကြောင်းပြောရအောင်။ ဒီနေ့နော် မနေ့ကလည်း မဟုတ်ဘူး၊ မနက်ဖြန်အတွက်လည်း မဟုတ်ဘူး။ သင့်ကိုယ်သင် အာရုံစိုက်ပြီး သင့်ဘဝကို ပြန်စတင်ဖို့အဆင်ပြေနိုင်မယ့် ဒီနေ့အကြောင်းပါ။ သင့်ဘဝကို ပိုပြီးမျှတစေဖို့၊ ပိုပြီးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ရစေဖို့ အောက်မှာ မျှဝေပေးမယ့် အချက်လေးတွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်။...
မိန်းကလေးတွေဆိုတာက အရွယ်လေးလည်းကောင်း၊ လှကလည်းလှဆိုတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ရွေးချယ်စရာ အများအပြားရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘဝနောင်ရေးအတွက်လည်း မှန်ကန်တဲ့ယောက်ျားလေးကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပြီး ဒီလိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ လုံးဝထည့်သွင်းမစဥ်းစားသင့်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ အချည်းနှီးဖြစ်နေတဲ့ ယောက်ျား အချို့သော...